Izindaba - Isimiso sokusebenza se-valve elawula umoya womoya
I-valve elawula i-pneumatic ibhekisela ku-valve yokulawula umoya, ethatha umthombo womoya njengamandla, isilinda njenge-actuator, isignali ye-4-20mA njengesiginali yokushayela, futhi ishayela i-valve ngezinsiza ezifana ne-valve valve positioner , i-converter, i-valve ye-solenoid ne-valve yokubamba, ukuze kwenziwe i-valve isenzo sokulawula ngezimpawu zokugeleza okuqondile noma okulinganayo, Ngakho-ke, ukugeleza, ingcindezi, izinga lokushisa kanye neminye imingcele yenqubo yepayipi eliphakathi ingalungiswa ngendlela elinganayo.
I-valve yokulawula umoya inezinzuzo zokulawula okulula, ukuphendula okusheshayo nokuphepha kwangaphakathi, futhi uma isetshenziswa ezimweni ezivuthayo neziqhumayo, ayidingi ukuthatha ezinye izindlela zokuqhuma.
Isimiso sokusebenza se-valve elawula umoya womoya:
I-valve yokulawula umoya womoya ivame ukwenziwa nge-pneumatic actuator nokulawula ukuxhumana kwe-valve, ukufakwa nokuthunyelwa. I-actuator yomoya ingahlukaniswa ngezinhlobo ezimbili: uhlobo lwesenzo esisodwa nohlobo lwesenzo esiphindwe kabili. Kukhona intwasahlobo ebuyayo ku-actuator yesenzo esisodwa, kepha ayikho intwasahlobo yokubuyisa ku-actuator yesenzo esiphindwe kabili. I-actuator esebenzayo eyodwa ingabuyela ngokuzenzakalela esimweni sokuvula noma sokuvala esethwe yi-valve lapho umthombo womoya ulahlekile noma i-valve yehluleka.
Imodi yesenzo ye-valve elawula umoya womoya:
Ukuvulwa komoya (okuvame ukuvalwa) kulapho ingcindezi yomoya ekhanda le-membrane inyuka, i-valve ihambela ngasendaweni yokuvula okwandayo. Lapho umfutho womoya wokufaka ufinyelelwa, i-valve isesimweni esigcwele esivulekile. Ngokulandelayo, lapho umfutho womoya uncipha, i-valve iya ohlangothini oluvaliwe, futhi lapho kungekho moya okokufaka, i-valve ivalwa ngokuphelele. Ngokuvamile, sibiza i-valve yokulawula ukuvulwa komoya njengephutha i-valve evaliwe.
Ukuqondiswa kwesenzo kohlobo lokuvala umoya (uhlobo oluvame ukuvuleka) kufana ncamashi nalokho kohlobo lokuvulwa komoya. Lapho umfutho womoya unyuka, i-valve iya ohlangothini oluvaliwe; lapho umfutho womoya uncipha noma ungasebenzi, i-valve izovuleka noma ivule ngokuphelele. Ngokuvamile, sibiza uhlobo lokulawula igesi lokulawula igesi njenge-valve evulekile enephutha
Umehluko nokukhethwa phakathi kwepulatifomu yebhola yesikhulumi ephezulu ne-valve yebhola ejwayelekile
Ipulatifomu yebhola yasepulatifomu ephezulu, ebizwa nge-high-ball ball valve, isebenzisa i-is05211 yokukhiqiza ejwayelekile, iphonsa i-flange eyisikwele noma eyindilinga ne-valve yomzimba njengomzimba, futhi ukuphela kobuso besikhulumi kuphakeme kunomphetho wangaphandle we-flange ukuphela, okungahambisani nokufakwa kwe-actuator yomoya kuphela, i-actuator kagesi namanye amadivayisi we-actuator, kepha futhi kuthuthukisa kakhulu ukuzinza phakathi kwe-valve ne-actuator, futhi ukubukeka kuhle kakhulu futhi kucwengekile.
I-high ball ball valve ingumkhiqizo wokuvela we-valve ejwayelekile yebakaki yebhola. Umehluko phakathi kwepulatifomu yebhola yesikhulumi ephezulu ne-valve yebhola ejwayelekile ukuthi ingaxhunyaniswa ngqo ne-actuator yokushayela ngaphandle kokungeza ubakaki wokuxhuma, kuyilapho i-valve yebhola ejwayelekile ingafakwa kuphela ne-actuator ngemuva kokuthi ubakaki ufakiwe. Ngaphezu kokuqeda ukufakwa kubakaki abengeziwe, ngoba kufakwe ngqo epulatifomu, ukuzinza phakathi kwe-actuator ne-valve yebhola kuthuthukiswa kakhulu.
Ubuhle bepulatifomu yebhola yasepulatifomu ephezulu ukuthi ingakwazi ukufaka ngqo i-actuator yomoya noma kagesi epulatifomu yayo, kuyilapho i-valve yebhola ejwayelekile idinga ukuxhumeka okwengeziwe kwe-valve, okungathinta i-valve esetshenziswayo ngenxa yobakaki ovulekile noma imvume yokuhlanganisa okweqile. I-valve yebhola yesikhulumi ephezulu ngeke ibe nale nkinga, futhi ukusebenza kwayo kuzinzile kakhulu ngesikhathi sokusebenza.
Ekukhetheni i-valve yebhola yesikhulumi ephezulu ne-valve ejwayelekile yebhola, ukwakheka kwangaphakathi kwepulatifomu ye-billiard valve kusengumgomo wokuvula nokuvala, okuhambisana ne-valve yebhola ejwayelekile. Ngaphezu kwezinzuzo ezibalulwe ngenhla, lapho izinga lokushisa eliphakathi liphakeme ngokwengeziwe, ubakaki wokuxhuma kufanele usetshenziselwe ukuvikela ukusetshenziswa okujwayelekile kwe-actuator futhi uvimbele i-actuator ukuthi ingakwazi ukusebenzisa ngenxa yokudlulisa okuphakathi kokushisa.
Ingxubevange Steel Ball Amaphayiphu, Bronze Ball Valve Nge Ptfe Izihlalo, Engagqwali Ball Amaphayiphu, Engagqwali Ball Valve, Bronze Ibhola Valve, Inhlanzeko Engagqwali Ball Amaphayiphu,